Zvakare inowanikwa ndeyeyechitatu beta yeWOSOS 3.2.2 yevagadziri | Ndinobva mac
Zvakare inowanikwa ndeyeyechitatu beta yeWOSOS 3.2.2 yevagadziri
Achidzima beta shanduro dzeApple dzakaburitswa nezuro masikati, Apple inotakura iyo iri zvakare yechitatu beta vhezheni yeWOSOS 3.2.2 yevagadziri. Kufanana neshanduro dzeMacOS, tvOS uye iOS, yazvino beta vhezheni yakaburitswa iyi Apple chishandiso inotisiya isu tisinganyanye nhau maererano nekushanda. Izvo ndezvekuvandudza kudzikama, chengetedzo uye kugadzirisa zvikanganiso zveiyo yapfuura beta vhezheni yakaburitswa nevakomana kubva kuCupertino, saka tinogona kutaura kuti hapana shanduko dzerudzi rupi nerupi maererano nekushanda kweiyo smart wachi inoshanda system.
Apple inoenderera neshanduro dzayo dzebeta kumidziyo yese uye nezuro masikati yakaburitsa vhezheni dzese dzevagadziri, zvinokwanisika kuti nhasi kana kunyangwe mangwana vachatanga beta vhezheni yevashandisi vanobatanidzwa muchirongwa cheveruzhinji beta. Parizvino uye pasina sarudzo dzekuyedza nhau dzinonakidza, zvakanaka kuti ugare kunze kweiyi beta uye mirira iyo yekupedzisira vhezheni.
Parizvino, zvatiri kujekesa nezvazvo kuti hapana nhau dzekuburitsa pachena mushure memaawa ekutanga mushure mekutanga uko ivo vagadziri vanga vachiona kodhi uye imwe data yeiyi mavhezheni matsva. Pane ramangwana watchOS 3.2.2 hapana shanduko dzakawandisa, asi inotevera vhezheni yesisitimu inoshanda iyo Apple ichatiratidza kumusangano wepasirose wepasi rose uchaitwa unotarisirwa muSan José anotevera June 5 (WWDC) kana iwe ukatiratidza chero inonakidza nhau yeaya akangwara mawachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvakare inowanikwa ndeyeyechitatu beta yeWOSOS 3.2.2 yevagadziri
Barcode Wizard + inotibvumira kuti tigadzire tsika mabhodhi
Amazon Pay inosvika kuSpain: Apple Pay online ine makwikwi